Dedaalka Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada ee Shirkaddaadu wax ma tari doonaa?
Maxay Tahay Suuragalnimada Istaraatiijiyaddaada Warbaahinta Bulsheed ay ku siin doonto Soo Laabashada Maalgashiga?
Talaado, Disembar 15, 2020 Talaado, Disembar 15, 2020 Douglas Karr
Toddobaadkan, macmiil aan la tashanayno ayaa weydiinaya sababta ay waxyaabaha ay sida adag ugu shaqeynayeen aysan ugu muuqan inay isbeddel sameynayaan. Macmiilkani uma shaqeyn inuu horumariyo waxyaabaha soo socda ee ku saabsan warbaahinta bulshada, halkii uu inta badan dadaalkooda ku dabaqi lahaa suuq geynta dibadda.
Waxaan u soo bandhignay sawir ah cabbirka cabbirka dhagaystayaashooda ee baraha bulshada marka la barbar dhigo tartamayaashooda - ka dibna waxaan siinnay saamaynta ay ku lahayd sida nuxurka tartameyaasha loo wadaagay. Tirooyinku waa kuwo aad u tiro badan… taas oo ku sii kordhineysa dhagaystayaal fara badan baraha bulshada ay ku liqayso qof kasta oo ku jira booska. Si aan ula tartamno waxa ku jira, macmiilkeennu waa inuu ku tartamo baraha bulshada, sidoo kale!
Si aad ugu guuleysato ka-suuq-geynta meheraddaada baraha bulshada, waxaad u baahan tahay inaad maal iyo waqti geliso. Geedkan go'aan qaadashadu wuxuu kaa caawinayaa inaad aragto haddii aad diyaar u tahay inaad bilowdo dadaal ballaaran oo warbaahinta bulshada ah taas oo kuu horseedi doonta fiiro gaar ah iyo hoggaamiyeyaal ganacsi.
Maalmahan, waxaa laga yaabaa inaan ku daro su'aal dheeri ah taasna waa inaad awood u leedahay ama aad kari weydo inaad ku dhiirrigeliso waxyaabahaaga warbaahinta bulshada adoo adeegsanaya astaamaha la dallacsiiyey iyo waxyaabaha ku jira. Haddii aad tahay shirkad bilaabaya dadaalkaaga warbaahinta bulshada, waxaad kuheli kartaa xawaare si dhakhso leh maalgashi lagu dhisayo dhagaystayaashaada si dhakhso leh.
Nasiib kuu ah, warbaahinta bulshada waxay leeyihiin xoogaa qalab ah oo waaweyn iyo beegsashada fursadaha aad ku samayn karto taas. Barmaamijyada sida Facebook, xitaa waxaad ku heli kartaa kala-soocid wanaagsan oo leh waxyaabo kor loo qaaday marka loo eego kaliya bogga shirkadda.
Shaacinta: Waxaan isticmaalayaa kuweenna Doqon xiriiriye xiriiriye.
Tags: geedka go'aankawarshadahaku soo noqo maalgashigaROIwarbaahinta bulshadawaxyaabaha ku jira warbaahinta bulshadabeddelka warbaahinta bulshadadhaleeceynta baraha bulshadabarashada bulshadageedka go'aanka warbaahinta bulshadahawlgelinta warbaahinta bulshadailaha warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada ku soo noqo maalgashigawarbaahinta bulshada roiwadaagida warbaahinta bulshadaxeeladaha warbaahinta bulshadabulshada roi
Tilmaam dhameystiran oo ku saabsan adeegsiga Navigator-ka iibiya LinkedIn